Arday ka socda Boosaaso oo ku guulaystay tartanka Quraan akhriska Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandArday ka socda Boosaaso oo ku guulaystay tartanka Quraan akhriska Puntland
June 28, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo abaalmarin guddoonsiinaya wiilka ku guulaystay tartanka Quraan Akhriska.
Garoowe-(Puntland Mirror) Ibraahim Maxamed Maxamuud oo Boosaaso ka socda ayaa ku guulaystay tartanka Quraan akhriska ee gobolada Puntland.
Madaxweynaha dowlada Puntland ayaa ka qaybgalay munaasabada lagu soo gabagabaynayay tartanka oo lagu qabtay masjidka al-Hudda oo kuyaala caasimada Puntland, Garoowe.
Mr. Ibraahim oo ku guulaystay tartanka Quraan akhriska ayaa lagu abaalmariyay gaari cusub.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo fuuraha gaariga abaalmarinta ah guddoonsiinaya wiilka ku guulaystay tartanka Quraan Akhriska.
Tartankan sanadlaha ah ayaa waxaa soo qaban-qaabiyay wasaarada diinta iyo awqaafta dowlada Puntland iyo mu’asasada al-Minhaaj oo Puntland kutaala.
September 3, 2016 Madaxweynaha Puntland oo hadal nacasnimo ah ku tilmaamay hadal Xasan Shiikh dhawaan uu ku sheegay in Puntland ay ka koobantahay labo gobol iyo bar
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegay deegaano kuyaala gobolka Gedo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa maleeshiyada Al-Shabaab kala wareegay deegaano kuyaala gobolka Gedo kadib dagaalo culus, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo saraakiisha dowladda. Sargaal katirsan dowladda ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamadu ay [...]